Khombisa amaphesenti we-Baterry | Kusuka kuLinux
Khombisa amaphesenti we-Baterry iyithuluzi elilula elihlose ukusiza abantu abanenkinga yokuhlonza i- iphesenti yebhethri yedivayisi. Omakhalekhukhwini babonisa kuphela uphawu olunemibala, kunzima ukukhomba imali ngqo ekhokhiswa ngumakhalekhukhwini.
Ukulungisa lokhu, uhlelo lokusebenza lufaka iphesenti lokushaja ibhethri ngenombolo ekhoneni elingakwesokunxele leseli lesimo. Ngakho-ke abathathi isikhala esikrinini sakho sasekhaya ngamawijethi noma bachitha isikhathi sakho ukuya kumenyu yezilungiselelo ze-Android.
Khombisa amaphesenti we-Baterry Kuyithuluzi elenzelwe ngokukhethekile amadivayisi angabonisi ibhethri ngenombolo, evimbela isilinganiso esinembile.
Ngosizo lohlelo lokusebenza, ungabheka kubha yomumo inombolo ehlukile ekhombisa ngokusobala ukuthi iphesenti lokushaja kwebhethri, kungashiyi indawo yokungabaza ngemiklamo engaqondakali.
Kodwa-ke, awukwazi ukwenza ngokwezifiso umbala noma usayizi wombhalo wakho, okuvimbela imininingwane ehambelana nesiqalisi sakho. Omunye umkhawulo ukuthi ulwazi lwesibili luhlala luvela ngakwesobunxele kumugqa wesimo futhi indawo ye-athikili ayinakuguqulwa.
Lolu hlelo lokusebenza lungalandwa ku-Google App Store ngokuphelele Futhi uqala ukujabulela into ebaluleke kakhulu kwi-smartphone njengokwazi isikhathi esiqondile ibhethri lakho elinalo futhi ngaleyo ndlela uthathe izinyathelo zokuqapha endaweni ngaphambi kokuphelelwa yiselula ngenxa yebhethri.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Khombisa amaphesenti we-Baterry
Guqulela ku-ogg / ogv, webm noma i-mkv ku-Linux nge-OggConvert